Nazi iindlela ezili-10 onokuthi wandise ukuzibandakanya kunye noMxholo obonakalayo | Martech Zone
Nazi iindlela ezili-10 onokuthi wandise ukuzibandakanya kunye noMxholo obonakalayo
NgoMvulo, Juni 28, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 13, 2021 Douglas Karr
Isicwangciso esiphambili kulwakhiwo ngokutsha lwethu kunye nokudityaniswa kwezentlalo bekugxile kumxholo obonakalayo. Ukwabelana nge-infographics esemgangathweni kwindawo yethu kuye kwaphakamisa ukufikelela kwethu kwaye kundivumela ukuba ndixoxe ngomxholo kubo ngesabelo ngasinye. Le infographic evela kwi-Canva ayifani - ukuhamba nomntu kuzo zonke iindlela ezahlukeneyo onokwenza umxholo obonakalayo. Kwaye ndiyalixabisa iqhekeza leengcebiso ababonelela ngazo:
Umxholo obonakalayo ukukunika inkululeko yokulawula umyalezo wakho, sebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye namajelo ukuze umyalezo wakho uwufumane, sisixhobo esiluncedo esingenasiphelo.
Umahluko sisitshixo kwi-intanethi. Njengoko sibhala inqaku emva kwenqaku, kuya kufuneka sisebenze nzima kakhulu sisahlulahlula kumawaka amanye amanqaku apapashwa yonke imihla kwiwebhu. Yongeza into ephambili ebonakalayo, nangona kunjalo, kwaye inqaku lithatha umbono omtsha ngokupheleleyo kubakhenkethi bakho. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ukwabiwa yelo nqaku inyuka ngokucacileyo.
Kule infographic, Canva u bonise Iindidi ezili-10 zoMxholo oBonakalayo oBonakalayo uphawu lwakho kufuneka lwenze ngoku:
Iifoto ezijonga amehlo - Iipesenti ezingama-93 zabathengi bathi imifanekiso # 1 yeyokuthatha isigqibo xa uthenga iimveliso.
Amakhadi eCaphulelo aKhuthazayo -Izicatshulwa zibonisa amaxabiso akho, kulula ukuzenza, kwaye zabiwa kakhulu.
Iminxeba eyomeleleyo yokuSebenza -I-70% yamashishini awanalo naluphi na umnxeba wokuthatha amanyathelo nangona ababukeli kunokwenzeka kakhulu ukuba bathathe inyathelo.
Imifanekiso enophawu -Ukusebenzisa imifanekiso eneenkcukacha kunye negama linokukunceda ufumane ingqalelo yabaphulaphuli abangama-67%.
Ukubonwa kwedatha enomdla -40% yabantu bayaphendula kwaye baqonde ulwazi olubonakalayo ngcono kunombhalo ocacileyo.
Ukubandakanya iiVidiyo -I-9% kuphela yamashishini amancinci awasebenzisayo, kodwa i-64% yabathengi bathambekele ngakumbi ekuthengeni emva kokubukela ividiyo.
Iingcebiso, amaqhinga, kunye nendlela yokwenza ngayo -Ubonelela ngexabiso kunye nokusetyenziswa kwemveliso yakho kwaye kunceda ukwakha igunya.
Izikrini ezifundisayo -I-88% yabantu bafunda uphononongo ukumisela umgangatho 'weshishini, thabatha umfanekiso weskrini sakho!
Imibuzo ecaphukisayo -Khuthaza ukwabelana, incoko, ukuzibandakanya kunye nokwazisa ngebrand
infografikhi - Kukho isizathu sokuba kutheni Highbridge ivelisa okuninzi infographics kubaxhasi bethu! Ngamaxesha ama-3 kunokwenzeka ukuba kwabelwane ngawo kwaye amashishini asebenzisa ingxelo ye-infographics eyi-12% yenzuzo ephezulu kunaleyo ingenjalo.
Ukubhengezwa: Ndililungu le Canva kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: imifanekiso enophawuidovaukubandakanya iividiyokwenziwa kanjanikwi-infographicngezantsiiifotoiifotoimibaamakhadi okucaphulai skrinitricksiintlobo zomxholo obonakalayoiividiyoumzobo obonwayo
Sep 14, 2017 kwi-6: 56 AM
Inqaku elimnandi kunye ne-infographic. Umxholo obonakalayo kunye nezinto zokuprinta zichaphazela kakhulu ukuhambisa umyalezo weshishini lethu kwabanye.